Fomba fanoratra samihafa
" Ary manana ny teny faminaniana atao mafy orina kokoa isika ; koa raha mandinika izany hianareo, dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazavan'ny andro, ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. " 2 Pet. 1:19
Tsy maintsy naneho ny heviny tamin'ny fitenin'olombelona ireo mpanoratra ny Baiboly. Olombelona manana fahalemena no nanoratra azy. Ny Fanahy Masina no nanome tsindrimandry azy ireo. Noho ny tsy fahalavorarian'ny fahatakaran'olombelona ny momba ny teny, na koa ny faharatsian'ny fisainan'olombelona, izay kinga amin'ny amin'ny fialàna amin'ny fahamarinana, dia maro no mamaky sy mandray ny Baiboly araka izay itiavany azy. Tsy dia hoe ny Baiboly no sarotra. Miady hevitra ny amin'ny teboka maromaro ao amin'ny lalàna manan-kery ireo pôlitisianina mifanandrina, ary manana fomba fijery mifanohitra izy ireo eo amin'ny fampiharana sy ny momba ireo lalàna ireo.
Nomena ny olona ny Soratra Masina, tsy toy ny fanambaràna mitohy tsy tapaka tsy akory, fa nomena tsikelikely tamin'ny alalan'ireo taranaka nifandimby, araka ny nahitan'Andriamanitra fotoana mety hitenenana amin'ny olona amin'ny fotoana samy hafa sy amin'ny toerana samy hafa, noho ny fitsinjovany antsika. Araka izay nitondran'ny Fanahy Masina azy no nanoratan'ny olona. "Mamontsina aloha, dia mamelana, avy eo dia mamoa", "Voalohany misy tahony, dia teraka, ary rehefa izany, dia feno voa." - Mar. 4:28. Tsy misy hafa amin'izany mihitsy ireo fanambaran'ny Baiboly amintsika.
Tsy voatery misy filaharany tsara na fitambarany mazava mandrakariva tsy akory ny Soratra Masina. Tsy nomena araka ny tena filaharany marina ireo fahagagana nataon'i Kristy, fa nomena araka ny toe-javatra mitranga, izay ilàna io fanehoana avy amin'Andriamanitra ny herin'i Kristy io. Tahaka ny harena miafina ireo fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Tsy maintsy karohina sy hadiana amin-piezahana fatratra. Ireo izay mijery ivelany fotsiny ny Soratra Masina, sady marivo ny fahalalany, kanefa lalina no fiheverany azy, dia hiresaka ny amin'ny fifanoherana ao anaty Baiboly, ary hametraka fisalasalana ny amin'ny fahefan'ny Soratra Masina.
Kanefa ireo izay manana fo mirindra amin'ny fahamarinana sy ny adidy dia hitady ny Soratra Masina amin'ny fo efa voaomana handray tsindrimandry avy amin'Andriamanitra.